कस्ताे छ तपाइकाे याे साता ? हेर्नुहाेस साप्ताहिक राशिफल – Jagaran Nepal
कस्ताे छ तपाइकाे याे साता ? हेर्नुहाेस साप्ताहिक राशिफल
मेष – सामाजिक काममा प्रशंसा मिल्नेछ । राजनीतिक लाभ हुनेछ । ठूलाबडाको साथले काम शुरू हुनेछ । रोजगारीमा अवसर पाइनेछ । आम्दानी बढ्ने व्यापारमा फाइदा एवं धनको कारोबारमा सफलता मिल्नेछ । साताको अन्त्यमा भने काममा तनाव आउने एवं अनावश्यक लाञ्छना लाग्नेछ । स्वास्थ्यको लागी खर्च एवं अनावश्यक तनाव बढ्नाले काममा बाधा हुनेछ ।